नारायणी डेभलपमेण्टको शेयरमूल्य सर्वाधिक वुद्धि
काठमाडौं। पुस २० गते शतप्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्ने अनुमति पाएको नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमुल्य मंगलवार सर्वाधिक वृद्धि भएको छ । कारोबारको दोस्रो घण्टामा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेको हो ।
प्रतिकित्ता रू। ४७ ले बढेर यो अवधिसम्म कम्पनीको शेयरमूल्य रू‍. ५२३ पुगेको हो । खरीद चाप उच्च हुँदा कम्पनीको शेयरमूल्य पनि बढेको हो । दोस्रो घण्टासम्मको कारोबार अवधिमा यस कम्पनीको ४७ हजार २४१ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री कर्ता देखिएका छैनन् ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १ बराबर १ को अनुपातमा रू. ६ करोड ५६ लाख १६ हजार ९०० बराबरको हकप्रद शेयर विक्री गर्न अनुमति पाएको हो । यो हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
उक्त कम्पनीले उक्त हकप्रद शेयर विक्री गर्न अनुमति माग्दै गत कात्तिक ७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा भएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारी थालेको थियो ।
विसं २०७० साल चैत २७ गते समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा भएको उक्त कम्पनीलाई विसं २०७७ साउन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरेको हो । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा भएको उक्त कम्पनीको रोक्का रहेको शेयर कारोबार मंसिर ८ गतेदेखि सुचारु भएको हो ।
Tagsनारायणी डेभलपमेण्ट बैंक नेप्से